Mbibi ọdachi: kedu ihe ọ bụ, njirimara ya, ihe kpatara ya na ụdị ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Na mbara ụwa anyị enwere ọtụtụ ihe egwu gburugburu ebe obibi nke anyị ga-eburu n'uche ebe ọ bụ na nsonaazụ ha dị oke njọ. Ọ gbasara ọdachi nkịtị. Ha na-abụkarị ihe ndị na-emetụta ndụ na ụmụ mmadụ n'ụzọ na-adịghị mma ma ọ bụ ihe kpatara ọbịbịa na-enweghị enyemaka mmadụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, mmadụ nwere ọrụ maka mmetụta nke nsonaazụ nke omume ọjọọ, ma ọ bụ teknụzụ ma ọ bụ atụmatụ ọjọọ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe ọdachi ndị na-emere onwe ha bụ, njirimara ha, nsonazụ ya na ihe atụ ya.
1 Gịnị bụ ọdachi na-emere onwe ya
4 Dị ọdachi ndị na-emere onwe ha
Gịnị bụ ọdachi na-emere onwe ya
Ọdachi ndị sitere n'okike bụ ihe ndị na-eme na-enweghị enyemaka mmadụ, nke nwere mmetụta na-adịghị mma na ndụ na ụmụ mmadụ. N’ọtụtụ ọnọdụ, ụmụ mmadụ na-ahụ maka nsogbu ezighi ezi na teknụzụ, nleghara anya, ma ọ bụ nsonaazụ nke atụmatụ ọjọọ.
Site n'ụdị ebumpụta ụwa nke na-ebute ọdachi ndị metụtara ya, enwere ọtụtụ ihe kpatara ọdachi ndị na-emere onwe ha. Ke ofụri ofụri, a ọdachi bụ kpatara ihe omimi nke ihu igwe, usoro geomorphological, ihe ndu ma obu ihe omuma. A na-ahụta ihe omume ndị a dịka ọdachi mgbe ha ruru oke. Ọdachi ndị na-emere ihu igwe na-agụnye ajọ ifufe, ebe idei mmiri, oké ọkọchị, ọkụ ọgbụgba, oké mmiri ozuzo, ebili mmiri, na ebili mmiri. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ọdachi oghere dị obere karịa karịa mmetụta nke meteorites na asteroids.
Ọdachi bụ ihe omume nke na - eme n’oge pere mpe, enweghi ike ịkọ nkọ ma nwee mmetụta na - adịghị mma na ndụ. Ọdachi nwere ike ibilite na nke mmadụ, nke kpatara ya site na ihe mmadụ, ma ọ bụ nke ụmụ mmadụ na-akpata.
Mgbe ihe omume, ma ọ bụ na-apụtachaghị, nwere mmetụta na-adịghị mma na ụmụ mmadụ, ọ na-aghọ ọdachi. Mgbe ihe omume mere na-enweghị enyemaka mmadụ, a na-ahụta ya na okike sitere na ya. Nke a bụ echiche anthropic nke mmadụ nọ dị ka ihe na-abụghị nke okike. N’ụzọ dị otú a, mmadụ na-amata ọdịiche dị n’etiti omume ya na nsonazụ ndị sitere na ihe omume ndị ọzọ n’eluigwe na ala.
N'ime ihe ndị na-akpata ọdachi ndị a, anyị nwere ihe ndị a:
Ọnọdụ ihu igwe: ha na eme na onodu di iche-iche na ihu-elu nke ikuku n’ime okpomoku, odida, ikuku, ikuku ikuku, wdg. Ọ na-abụkarị mgbanwe a na-agbanwe na mberede nke ikuku na-akpata ihe ịtụnanya dịka ifufe, oké ifufe eletriki, oké ifufe, ebili mmiri nke oyi ma ọ bụ okpomoku.
Geomorphological na-akpata: ha na-ebukarị mgbe mmegharị nke tectonic plate na ihe na-agbanwe agbanwe nke ala na mkpuchi na-akpata ala ọma jijiji, mbufịt na mgbawa ugwu mgbawa.
Ndu na-akpata: ahaghị nhata na gburugburu ebe obibi nwere ike ibute uto nke ihe ndị na-akpata ọrịa na ihe nkedo ha. N'ụzọ dị otú a, uto nke nje na nje nwere ike ịmepụta ọrịa na-efe efe ma ọ bụ ọrịa na-efe efe.
Mpụta ohere: Meteorites na asteroids na-abanye na mbara ikuku ụwa nwere ike ibute oke mbibi.
Dị ọdachi ndị na-emere onwe ha
A na-ahụta ihe ọ bụla metụtara oke ọkwa dị ka ọdachi na-emere onwe ya. Ka anyị lee ihe ha bụ:
Akwa: ọ bụ ọdịda nke nnukwu mmiri nke snow na ala dị larịị n'ihi mmetụta nke ike ndọda. Ọ bụrụ na ọ na-apụta n’ebe mmadụ bi ma ọ bụ mee njem, ọ nwere ike ibute oke ọdachi.
Nsogbu Tropical: Ha bụ oké ifufe na-agbanwe agbanwe nke dị ukwuu. Igwe mmiri ozuzo ndị a na-esonyere oke mmiri ozuzo na ifufe dị elu. Ifufe nwere ike ịkpata ahụ erughị ala n'oké osimiri, idei mmiri, bibie akụrụngwa yana nwedịrị ike ịnwụ ọnwụ nke ndị mmadụ.
Ihe ngosi ala: Ọ bụ ije dị ka nnukwu mmiri mana ọ nwere ọtụtụ ugwu ugwu ọ dị larịị. Ọ na - apụtakarị n'ihi oke mmiri ozuzo siri ike ma dịte aka na - edozi ala na mmiri ma na - ebute mbuze. Ha nwekwara ike ime n'ihi ịdị adị nke ala ọma jijiji.
Ọrịa na ọrịa na-efe efe: ọrịa na-efe efe nwere ike ịkpata nnukwu nsogbu. Ọrịa ndị ahụ na-agbasa site na ọrịa ma nwee ike ibute ọrịa.
Ihe mgbawa ugwu: ha bụ oke nchụpụ nke magma, ntụ na gas ndị na-abịa site na mkpuchi ụwa. Magma ahụ na-agagharị n'ime mmiri nke na-agagharị n'elu ụwa ma gbaa ihe niile dị n'okporo ụzọ ya ọkụ.
Ekele: oké mmiri ozuzo nke nwere oke mmiri ozuzo 5-50mm ice ice nwere ike imetụta ma mebie nnukwu mbibi.
Meteorite na kọmpụta mmetụta: ha anaghị adịkarị ma ha nwere ike ibute nnukwu mbibi. Meteorite bụ ahụ dị obere nke eluigwe dị mita 50 n’obosara.
Ọhịa oke ọkụ: Ọtụtụ ọkụ ọgbụgba bụ mmadụ ka ọ mere, ọ bụ ezie na ọtụtụ na-ewere ọnọdụ dị ka ihe dị adị. Ọnọdụ oke ọkọchị nwere ike ịgbapụsị ahịhịa kpọrọ nkụ wee bido ọkụ.
Idei mmiri: A na-eme ha site na nnukwu osimiri na ọdọ mmiri mgbe oke mmiri na-ezo. Ogologo nkpuchi nwere ike ibibi akụrụngwa, dọrọ ụmụ anụmanụ na ndị mmadụ, gbanye osisi, wdg.
Oké ọkọchị: Ọ bụ enweghị mmiri ozuzo ruo ogologo oge na nnukwu okpomọkụ. A na-efu ihe ọkụkụ, ụmụ anụmanụ na-anwụ, ụmụ mmadụ na-ahapụkwa mpaghara ahụ n'ihi agụụ na akpịrị ịkpọ nkụ.
Ala Ọma Jijiji: ha na-atụ egwu nke ukwuu n'ihi ịbụ ndị a na-ejighị n'aka na ha nwere ike ịnwe nnukwu nsonaazụ. Ọ nwere ike ịkwatu ihe owuwu, kpatara mgbawa, gbawaa paịpụ mmiri, mmiri mgbochi na ihe ọghọm ndị ọzọ.
Aja na aja ikuku: ha na-eme na ala kpọrọ nkụ na ọkara mmiri ozuzo. Karịsịa ọzara na-ebute site na ifufe siri ike nke na-ewepu ájá ma mepụta igwe ojii nke nwere ike ibute ọnwụ nke ndị dị ndụ n'ihi nsị na abrasion.
Akwụsịla ahụ- Ọ bụ aja na oke ikuku na - ebute ha ma nwee ike bụrụ ndị na - akpata nsogbu na - eweta nsogbu na - ebute nsogbu iku ume.
Oké ifufe: Ha na-eme n'ihi nchịkọta nke mmelite na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ nke na-abanye na ikuku na-adịghị agbanwe agbanwe. N'ihi ya, a na-eme àmụmà na àmụ̀mà na-eso oké mmiri ozuzo, ifufe na ọbụna akụ mmiri ígwé.
Tornado: ọ bụ ndọtị nke igwe ojii nke na-eme cone nke ikuku na mgbanwe. Ha nwere ike ibibi akụrụngwa, mebie ụzọ nkwukọrịta ma yie ndụ anụmanụ na nke mmadụ egwu.
Mbufịt: a na-akpọkwa ha ebili mmiri. Ihe kpatara ya bụ ịdị adị nke ala ọma jijiji dị n'okpuru mmiri nke na-ebute nnukwu ebili mmiri na-agba ọsọ ọsọ ọsọ. Na mmetụta n'ụsọ oké osimiri, ha nwere ike ịmepụta nnukwu ọdachi n'ihi mmetụta na idei mmiri.
Okpomọkụ ikuku: Ọ mejupụtara mmụba ọkụ mgbe niile nke mpaghara dị elu karịa nkezi nke kwesịrị maka otu ebe na oge nke afọ. Ọ na-abụkarị mmiri ozuzo.
Oyi na-efe: na-abụghị ya bụ okpomoku ọkụ ma ha na-esokarị ajọ ihu igwe.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihe ọdachi na-emere onwe ya na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ọdachi ndị na-emere onwe ha
Mmiri dị na mmiri